Semalt: Ukuvimbela indawo kwiKhompyutha yakho okanye kwi-Android Phone
Ukuba ukhusela umntwana wakho okanye ufihla ulwazi lomntu siqu, kukho iindlela ezithile zokuvimba izingosi ezingafunekiyo kwiikhompyutheni okanye kwisixhobo eselula. Abantu abaninzi banenkxalabo malunga nobumfihlo babo be-intanethi kwaye bafuna ukuvimba iiwebhusayithi ezithile ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko lwabo olupheleleyo kunye nezingane zabo. Ezinye iiwebhsayithi zinokuthi ziqulethe kwaye zisasaze ii-virus, i-malware kunye ne-bots - ???? ray ban wayfarer. Kukho amathuba okuba aya kuba nequlatho enomxholo okanye umntu unokuba ulwazi lwakho lwangasese. Ngokuqinisekileyo, unokuziphepha ezo ziza, kodwa oko akusiyo isigxina, kwaye kufuneka uthathe amanyathelo angundoqo.
Vimba iWebhu kwiikhompyutha zeWindows:
uMax Bell, u-14 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi kukho iindlela ezininzi zokuthintela iwebhusayithi, kwaye unokukhetha indlela esekelwe kwisiphequluli sakho, i-router yakho yenethiwekhi kunye nayo yonke imisebenzi inkqubo. Umqolo omkhulu we-Intanethi yi-DNS inkqubo yokuguqulela elula kwaye kulula ukukhumbula amagama afana ne-www.google.com kunye nee-IP. Ngethuba usebenzisa i-DNS iseva ukuya kwiiwebhusayithi, ikhomputha yakho iya kuba nolwazi olukhoyo njengefayile yeMikhosi. Le fayili isetyenziselwa ukukhubaza ukufikelela kumaziko asolisayo. Indlela elandelayo isebenzayo kokubili kwi-Windows 7 nabasebenzisi be-Windows 8:
Udinga ukufikelela kwicandelo lomlawuli wekhompyutheni yakho kwaye ungene ngemvume usebenzisa igama lomsebenzisi kunye nephasiwedi, uze ufike kwi C: \_ Windows \_ System32 \_ abaqhubi \_ njl.
Cofa kwifayili ebizwa ngokuba yimikhosi kwaye ukhethe i-Notepad kwiluhlu lweeprogram. Cofa kwiqhosha le-Ok uze uhlele ifayile.
Ekupheleni kweli fayile, kuya kufuneka ufakele ii-URL ongathanda ukuzenza. Ngenxa yoko, unokongeza imigca embalwa ekupheleni kweli fayile, nge 127.0.0..2. Emva koko kufuneka ubhale igama lewebhusayithi uze uvalwe.
Vimba indawo kwifowuni yakho ye-Android:
Kwi-Android umsebenzisi, kukho iingcebiso ezimbalwa kunye nezinto ozozikhumbula. Ukuba unomnxeba osisigxina, umzekelo, unokuthi uvimbele iisayithi ngokulula ngokuhlela iifayile zeMikhosi kwisixhobo kwaye uqondise abahlaseli kwamanye amawebhsayithi. Ngenxa yoko, uya kufuna umphathi wefayili kunye nomhleli wombhalo. Okukhethwa kukho kukusebenzisa i-ES File Explorer, esenza sikwazi ukwenza imisebenzi emininzi ngexesha elifanayo.
Faka i-ES File Explorer uze uthethe iqhosha le menu phezulu.
Kwifolda yenkqubo, ungabona ifayile ebizwa ngokuba yiMikhosi. Kufuneka uthayiphe kwaye uye kwimenyu ephumayo. Lapha kufuneka ufike kwi-ES Note Editor inketho.
Thepha iqhosha lokuhlela kwaye uhlele ifayile. Apha uya kufuneka ubhale ii-URL kunye namagama esayithi ofuna ukuyivimba.
Musa ukulibala ukuhambisa i-DNS yabo, kwaye uthayiphe 127.0.0.2 www.blockwebsites.com kumgca omtsha.
Qalisa kwakhona ifowuni ye-Android xa wenze izinto ezi ngasentla
Ukuba uvakalelwa kukuba le ndlela yinkimbinkimbi, kufuneka ufake ii-untivirus zokusebenza ezifana ne-Trend Micro eziya kukuvumela ukuba uzivimbele iiwebhusayithi ezinokukrokra ngokuzenzekelayo. Umele ufakele le app uze uyisebenze. Yiya kwiinketho> Indawo ekhuselekileyo kwaye uswayine kwi-Controls Parents. Apha ucofa uze ulungise i-akhawunti. Emva kokuba i-akhawunti idalwe, ungayibhalela njengeZithintelo eziViweyo kwi-app yakho kwaye ungeze iiwebhsayithi ongathanda ukuzenza ngexesha.